Xog Isbar-bar Dhiga Askaeiga Muuse Biixi Iyo Madaxweynaha Dalka Uu Booqday Ee Guinea Conakry (Abdi-Shotaly). | Salaan Media
Xog Isbar-bar Dhiga Askaeiga Muuse Biixi Iyo Madaxweynaha Dalka Uu Booqday Ee Guinea Conakry (Abdi-Shotaly).
Dalkan Guinea oo ku yaala galbeedka qaarada Afrika waxa uu xornimada ka qaatay dalka faransiiska sanadkii 1958, Caasimadiisuna waa Conakry.Tirada dadka ku nool dalka Guinea ayaa lagu qiyaasay inay yihiin 12 Milyan, waxaanu ka mid yahay wadamada ku yaala qaaradan Afrika ee aan xidhiidhka dublamaasiyadeed la lahayn dalalka bariga Afrika ee somaliland ka mid tahay.
Madaxweynaha dalkan Guinea waxa lagu magacaabaa Alpha Condé oo kaas oo dhashay 4 March 1938, waxaanu soo noqday gudoomiyaha Midawga Afrika intii u dhaxaysay 2017-2018.
Madaxweynaha dalka Guinea waxa uu noloshiisa inta badan ku soo qaatay mucaaradnimo uu kaga soo horjeeday dawladihii kala danbeeyey ee Guinea isagoo laba goor oo kala ah 1993 iyo 1998 u tartamay kursiga Madaxweyne balse uu waayey.
wuxuu talada ku guulaystay markii koowaad sanadkii 2010 ka dib doorasho muran badan ka dhacay iyadoo mar kalena 2015 doorasho kale oo dhacday uu ku guulaystay iyadoo ku shubasho iyo is daba marin badan oo dhacday ay sababtay in xisbigii u weynaa mucaaradku diiday natiijadii.
Madaxweynahan Guinea oo ah dalka uu booqanayo Askariga somaliland ayaa markuu tartankii ololaha ku jiray wuxuu ku ololeeyey inuu xoojinayo dimuqraadiyada Guinea iyo inuu la dagaalamayo musuqmaasuqa hase ahaate waxa isaga iyo wiilkiisa lagu eedeeyey inay gacmaha kula jiraan fadeexado baahsan oo musuqmaasuq oo la xidhiidha macdanta oo dalkaasi Guinea ku yahay.
Shirkad la yidhaahdo (Sable mining) oo macdanta ka shaqaysata oo lacag badan ku bixisay doorashadii madaxweyninimo ee dalkan uu booqanayo Askarigu gadava ayaa waxa ay laaluush badan siisay sidoo kalena helicopter u iibisay wiilka uu dhalay madaxweynaha Guinea si wiilka Askatigu dhalay ugu ilaaliyo goobaha ay macdanta ka gurtaan inaan laga taaban. Dalkan guinea ayaa ah dal ka mida kuwa u qanisan Africa iyagoo caan ku ah macdanta, hase ahaatee dadkiisu waa kuwa ugu faqiirsan galbeedka africa sababta oo ah waxoodii oo loo xidhay shirkado awood ka haysta qasriga.
Dalkan Guinea sanadkii 2014 ayaa waxa uu ahaa dalalkii u horeeyey ee uu ka dilaacay cudurka ebola kaas oo uu ku laayay dad badan, ka dibna ku faafay wadamada Liberia iyo Sierra Leone, halkaasna mudada weftiga askarigu joogo digtooni bay u baahan tahay. Waa halis waayo maadaama cudurkani dhawaan dib u dilaacay.
Haddaba Askarigu muxuu ka matalayaa madaxweynahan uu booqanayo dalkiisa?
1: Askariga ayaa ka matalaya madaxweynaha guinea dhinaca ah, inuu dhamaan mucaarad ku soo ahaa dawladihii kale danbeeyey ee dalka soo maray ilaa dawladii kala shaqaysay inuu kursiga boobo oo taageerayaashiisii xilligaas, oo ah heegada hadda ay ku tuureen shaani.
2- Doorashadii uu ku soo baxay Askarigu, oo uu ka dhashay muran badan oo sababay in dad innagaga baxaan, ilaa aakhirkii xisbigii u weynaa mucaaradku tanaasulay si la mid ah Madaxweynaha uu dalkiisa booqanayo.
3- Askariga oo olalihii ku galay inuu wax ka qaban doono musuqa, baa isagu bilaabay, ee aanay jirin ilaa hadda wax muuqda oo uu ka qabtay inuu sii kordho mooyee,(silent corruption) iyadoo arrimo ganacsi looga faa’iidaystay awoodii maamul si la mid ah, sidda wiilka uu dhalay madaxweynaha dalka guinea ee shirkadahu laaluushaan.
4- Askariga oo ololihiisi doorashada mid ka mid ah shirkadihii maal-galiyey dhawaan siiyey qandaraas lagu soo iibinayey qalab lagu shaybaadhayo waxyaabaha dekeda soo mara sida hctv sheegay, sidoo kalena u sii ilaaliyey inaan laga taaban kootadii u xidhnayd, si la mid ah madaxweynaha uu dalkiisa booqanayo oo shirkadii ololihiisii taageertay, u ilaaliyey inaan laga taaban mashruuceeda macdanta.
5- Askariga oo ku ololeeyey xoojinta dimuqraadiyada, ayaa ku guuldaraystay iyadoo intii uu joogay xoriyadda hadalku gaadhay halkii u hoosaysay, sidoo kale wuxuu ku dhacay in dalka doorasho barlamaan ka dhacdo, sida muuqata iyadoo ay sababayso Askarifa oo wada shaqayntii ka jeclaaday ila muran, Sida Madaxweynaha Uu dalkiisa Booqday. Dowladnimada Waxay ka jecel yihiin Qoys-nimo in lagaga faa’iidaysto Awoodihii dalka u sareeyey.
* N.B Waynaan Dareemine Dadka Kii Dhergaw Daran.